ခွေးတစ်ကောင်အစာကျွေးလမ်းညွှန် | Dogs World
ငါခွေးကိုချစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ခွေးတွေကိုချစ်တယ်လို့ယူဆတာဟာပုံမှန်အတိုင်းပဲ။ ထို့ပြင်မဖော်ပြနိုင်သောမေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခွေးများအပေါ်ကျွန်ုပ်ခံစားရသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လိုအပ်ချက်အချို့ကိုဖန်တီးပေးပြီး၎င်းတို့အားတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖုံးအုပ်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးဟာဆက်နွယ်မှုရှိဖို့၊ ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးကြာရှည်ခံဖို့ပါ။ ဒီတော့ခွေးချစ်ကြတယ် ငါ့ရဲ့ခွေးတွေနဲ့အတူနေဖို့ငါလက်မှတ်ထိုးမယ်။ ငါသည်လည်းသင်တို့ပြုသည်ကိုငါသိ၏။ အဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်၊ အဲဒါကသူတို့ကိုလုံးလုံးကျန်းမာအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းနဲ့စတယ်။ ငါတို့သည်အစားအစာနှင့်အတူစတင်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ငါတို့စားသည်မှန်လျှင်၊ သင့်ခွေးသည်ကီလို ၂၀ လျှင်ယူရို ၂၀ ကုန်ကျသော Mercadona အမှတ်တံဆိပ် Compy မှအစားအစာကိုစားနေပါသလား။ငါတို့၏တိရစ္ဆာန်များကိုအဘယ်သို့ကျွေးသနည်း။ မင်းရဲ့အစားအစာကိုငါတို့ချဉ်းကပ်နည်းကမင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။ ပြီးတော့သူမကောင်းရင်ငါထင်တယ်၊ ငါ့ခွေးဘာစားသင့်သလဲ
ဒီနေ့ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းကိုပြမယ် သင့်ခွေးများအစာအာဟာရအတွက်အမြင်အသစ်တစ်ခု၎င်းသည်ပိုမိုချွေတာ။ ကျန်းကျန်းမာမာရှိပြီး၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်ကို ပို၍ ပျော်ရွှင်စေပြီးပျော်ရွှင်စေသည်။ အစာစားခြင်းနှင့်မျှတသောအစားအစာဖြစ်ခြင်းသည်ခွေးဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် ado မရှိရင် Canine Feeding Guide နဲ့ထားခဲ့ပါ။ စာဖတ်ရတာပျော်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
1.4 အစစ်အမှန်အစားအစာ vs အတုအစားအစာ
2.1 အဆိုပါ piramid
2.1.1 အသား၊ အရိုး၊ ငါးနှင့်ဥ
2.1.9 စက်မှုအစားအစာ, သကြားလုံး, ချောကလက်
2.2 နှစ် ဦး အရေးကြီးသောသဘောတရားများ: အမျိုးမျိုးနှင့်စံ
ငါခွေးတစ်ကောင်အာဟာရနှင့်ပတ်သက်။ ငါ့ယခင်ပို့စ်နှစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲဤအကြောင်းကိုပြောနေတာကိုစတင်နိုင်ပါ။ On ခွေးများနှင့်အစားအသောက်စိတ်ဖိစီးမှု ငါတိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းနှင့်စကားပြောခြင်းမရှိဘဲသင်စားသောအရာသည်သင်၏ခွေးများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုငါပြောမည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းသမိုင်း ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါတို့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုကျွေးမွေး၏။ ဒီလမ်းညွှန်နဲ့မစတင်မီသူတို့ကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်။
ငါတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့သလိုပဲ ခွေးအသားစားဖြစ်ကြသည်။ omnivores မရှိပါ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာကိုအသေအချာစဉ်းစားပါက၊ သူတို့သည်ငါတို့နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၊ ၁၅၀၀၀ ခန့်မျှသာရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်တိရစ္ဆာန်၏အခြေခံအစားအစာကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်မျှကြာခဲ့သည်။ ဒါဟာနွားတွေဟာအရင်ကထက်ပိုစားလာပြီးငါတို့အနားမှာရှိနေဖို့အမဲသားကိုစားတော့မယ်လို့ပြောတာနဲ့တူတယ်။ ယုံဖို့ခက်တယ်မဟုတ်လား။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနိုင်သော်လည်းလူသားများကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲသောပမာဏနှင့်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုဟာနှစ် ၆၀၀၀ လောက်ရှိပြီဆိုတာသတိရပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေးများသည်အသားစားသူများဖြစ်ကြသည် သူတို့ကသင့်တော်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အသားလိုတယ် နှင့်ကောင်းသောခံစားရတယ်။ အစာမစားမှီအစားအစာမစားမီခွေးများသည်အဓိကအားဖြင့်လူတို့၏အပိုင်းအစများ၊ ကြက်ခွံများ၊ နှင့်သူတို့၏အစားအစာနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများသည်လက်တွေ့တွင်သုညဖြစ်သည်.
ယနေ့ခေတ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များစွာကိုပေးသင့်သည့်ခွေးတစ်ကောင်စားနပ်ရိက္ခာလုပ်ငန်း၌နည်းပညာရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုပြfewနာနည်းစေပြီးတိရစ္ဆာန်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာကျွေးမွေးရန်တာ ၀ န်ပေးသည်။ အစားအစာသည်းမခံသောပြfနာများ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ပျက်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါစသည့်ခွေးများ။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်သီအိုရီအရရောဂါများမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန်အတွက်တိကျသောထုတ်ကုန်များရှိခြင်း။
သို့သော်အမှန်တရားမှမည်သည့်အရာမျှ ထပ်မံ၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ငါပြီးသားဆောင်းပါး၌ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့ (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းသမိုင်း), ကျွေးမွေးခြင်းမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်များအစာကျွေးခြင်း, ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများ၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ တစ်နှစ်လျှင်ဘီလီယံထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမြတ်အစွန်းရှိခြင်း။ ငါပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာ။ ၎င်းသည်၎င်းအားကြော်ငြာများနှင့်ဖောက်သည်များအားလုံးမှတစ်ဆင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ရည်မှန်းထားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းသည် multimacionales ကြီးများကိုဂရုစိုက်သောကဏ္ of တစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်းသည်သူတို့ကိုအစားအစာ၊ ဓာတ်မြေသြဇာသို့မဟုတ်ဆပ်ပြာများကဲ့သို့သောကဏ္fromများမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား (၁၃၃ ကီလိုအိတ်) တွင် ၈၅ ယူအက်စ်ထုတ်ကုန်အဖြစ်လွယ်ကူသည့် (သူတို့အတွက်မများသော) နည်းလမ်းဖြင့်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ၁၅ ကီလိုကိုတောင်မထားတော့ဘူး။ ဒါက Aesop ရဲ့ဒဏ္fromာရီပါ.
စားသုံးသူများအတွက်အစားအစာကိုသူတို့ခွေးများအားကျွန်ုပ်တို့ခွေးများအားပေးသောကြီးမားသောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးများကိုပေးသည်ဟုထင်သောဤကြီးစွာသောလိမ်လည်မှုကြီးကိုသူတို့ထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာ Nestle Purina၊ Mars Inc၊ Del Monte၊ Colgate-Palmolive သို့မဟုတ် Kraft, ဒါဟာတိရိစ္ဆာန်ဆရာများ၏ပညာရေးမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကလေးသူငယ်များ ... ခင်ဗျားဘယ်လိုဖတ်မလဲ။
ငါတို့နားလည်ရမယ် တိရိစ္ဆာန်ဆရာအားလုံးတိရိစ္ဆာန်ဝတ်ရည်၏အထွေထွေ Practitioner ထက်အခြားအချည်းနှီးဖြစ်၏ဆိုလိုသည်မှာအချို့သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ တိတိကျကျမဖော်ပြရန်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်နေရာအားလုံးတွင်အလွန်အခြေခံကျသည်။ ဆိုလိုသည်မှာခွေးတစ်ကောင်အစာအာဟာရကဲ့သို့သောနယ်ပယ်များတွင်၎င်းတို့၏လေ့ကျင့်မှုသည်အလွန်ရှားပါးပြီးအများစုအတွက်ကုမ္ပဏီများကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အလုပ်သမားများပေးသောလေ့လာမှုများနှင့်သင်တန်းများအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေးတွေကိုကျွေးမွေးဖို့ပြtheနာတစ်ခုကခွေးတစ်ကောင်ကိုအစာကျွေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တယ် ၎င်းတို့သည်စမ်းသပ်မှုများ၊ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများ၊ ကွန်ဖရင့်များ၊ ဘယ်မှာသူတို့သိပ္ပံနည်းကျတရားဝင်မှုနှင့်ထို့နောက်သူမြားဖြစ်ကြောင်းတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးပညာရှင်များမှတဆင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်မှလူမှုရေးအရေးပါမှုကိုပေး သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်အစာကျွေးခြင်း၊ သူတို့ရဲ့ဆေးခန်းများမှအစာကျွေးမွေးသောအစာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိရစ္ဆာန်များ၏ကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကအစားအစာဖြစ်သည်။ ငါကပိုကျယ်ပြောပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောနိုင်ဘူး။ ၏ဖျောပွဆောင်းပါး၌တည်၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းသမိုင်းငါကအကြောင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပြောဆိုပါ။
ဤရွေ့ကား၊ ကျွန်ုပ်တို့ခွေးများအားနေ့စဉ်တည်ရှိနေသောကွတ်ကီးများနှင့်အနီးကပ်ဆုံးအစာစားရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးများကို ဆက်လက်၍ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကတောင့်ကိုစားဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတိုင်းအချိန်တိုင်းကျွန်တော့် vet ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုရူးသွပ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ပိတ်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျနော့်မေးခွန်းကကမ္ဘာပေါ်မှာယုတ္တိအရှိဆုံးအရာလို့ထင်တယ်။ ဒါထိုကဲ့သို့သောပြီးပြည့်စုံသောအစားအစာ, ဒါကျန်းမာလျှင် သူတို့ဘာလို့မစားတာလဲ... ပြီးတော့အဖြေကိုလွယ်ကူသည် ... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဟာရ၏။ ပြီးတော့အတူတူပဲအမြဲတမ်းအစာစားခြင်း၏ပျင်းရိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အစစ်အမှန်အစားအစာ vs အတုအစားအစာ
ခြင်္သေ့များ၊ ကျားများ၊ သစ်ကုလားအုတ်များ၊ ၎င်းတို့သည်စိုစွတ်သောအစားအစာများကိုရေများများစားစားအတွက်လိုအပ်သောအာဟာရများ၊ အင်ဇိုင်းများနှင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုရှာဖွေသည်။ ဒါအရေးကြီးတယ် ဒါဟာအစာကျွေးရုံသာမကအစားအစာ၏အရည်အသွေးလည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အစာ ၆၀၀ ဂရမ်နှင့်သဘာဝအစာ ၆၀၀ ဂရမ်တွင်တွေ့ရသောရေနှင့်ခြောက်သွေ့မှုပမာဏကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါအစာသည် ၉၀% ခြောက်သွေ့သောအရာများနှင့် ၁၀% မျှသာပါဝင်သည်၊ သဘာဝအစားအစာတွင် ၂၀% ဖြစ်သည် ခြောက်သွေ့သောအရာနှင့်ကျန်, 600% ရေ။ ဆိုလိုသည်မှာတူညီသောအစားအစာပမာဏတွင်အစာသည်သဘာဝအစားအစာတွင် ၁၂၀ ဂရမ်သာဆန့်ကျင်။ ခြောက်သွေ့သောအရာ ၅၄၀ ဂရမ်ရှိသည်။ အဆိုပါခြားနားချက်ကြီးမားသည်။ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်ဖိအားများကျဆင်းခြင်းကဲ့သို့သောခြောက်သွေ့ပြီးအဆင့်မြင့်စွာထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်သည်ခွေး၏အစားအစာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများစွာကိုဖြစ်စေ၊ အားလုံးနီးပါးဖြစ်စေရှုံးသည်။ ၎င်းသည်အာဟာရပါ ၀ င်သည့်အာဟာရ ၁၂၀ ဂရမ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်ပါ။ သဘာဝအစားအစာထဲမှထွက်လာသောသက်ရှိအင်ဇိုင်းများနှင့်ဘက်တီးရီးယားများ။ ငါပြီးခဲ့သည့်အတိုင်း, နှိုင်းယှဉ်မုန်းတီးမှုဖြစ်ပါတယ်။
ငါဘာသာရပ်အပေါ်လေ့လာသင်ယူခဲ့သမျှနှင့်အတူငါကဒီဖန်တီးခဲ့တယ် ခွေးတစ်ကောင်ကိုအစားအစာပိရမစ်သင့်ခွေး၏အစားအစာအပေါ်တွင်အခြေခံသင့်သည့်အချက်ကိုငါအတိုချုပ်ပေးသောနေရာ၊ ယခုတွင်ငါသည်၎င်းကိုတစ်ချက်ချင်းစီပြန်လည်သုံးသပ်မည်။
အသား၊ အရိုး၊ ငါးနှင့်ဥ
ဒါဟာခွေးရဲ့အစားအစာ၏အခြေခံသည်။ ခွေးသည်သူလိုအပ်သောအရာမှန်သမျှရရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များမှအခြေခံအာဟာရများကိုရရှိရန်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောတိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းလိုအပ်သည်။ ပရိုတိန်း၏အရည်အသွေးကိုသိရှိရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရေးကြီးသောအချက်သုံးချက်မှာ - ပရိုတိန်း၏အရင်းအမြစ်, အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်၎င်း၏အစာချေ.
တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်ပရိုတင်းများတွင်ပါ ၀ င်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ပရိုဖိုင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ခွေးများနှင့်ကြောင်များအတွက်တိရိစ္ဆာန်ပရိုတင်းများကို“ ပြည့်ဝသောပရိုတိန်း” များဟုခေါ်တွင်ပြီးအပင်ပရိုတင်းများကိုမပြည့်စုံသောပရိုတိန်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။
ပြောင်းဖူးအချိုမှုန့်၊ ပဲပုပ်သို့မဟုတ်သီးခြားအပင်ပရိုတင်းများကဲ့သို့သောအပင်ပရိုတင်းများသည်ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်လိုအပ်သည့်အချိုးအစားအတိုင်းအမိုင်နိုအက်ဆစ်များမပါ ၀ င်ပါ။
အပင်ပရိုတိန်းများတွင်မကြာခဏချို့တဲ့သောခွေးများနှင့်ကြောင်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များတွင်ပါဝင်သည် serotonin ထုတ်လုပ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော arginine, taurine, methionine, lysine နှင့် tryptophan, \_ t ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနားယူရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများကိုဖယ်ရှားပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
ခွေးများနှင့်ကြောင်များ၏အစာချေစနစ်များတွင်အပင်ပရိုတင်းများသည်အသားပရိုတင်းများထက်အစာချေဖျက်မှုနည်းသည်၊ ထို့ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းများသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် - ၎င်းတို့သည်အလွယ်တကူအစာကြေနိုင်ပြီးခွေးများနှင့်ကြောင်များအတွက်မရှိမဖြစ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များပါရှိသည်။
တိရိစ္ဆာန်များ၏အဆီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးရရှိနိုင်သောအကြီးမားဆုံးစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူသားတစ် ဦး အတွက်ကျန်းမာသောအစားအစာနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှစွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူသည် ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ခွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့အရင်းအမြစ်မှစွမ်းအင်ရရှိခြင်းမရှိဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသည်။ ကောင်းပြီ၊
၏အဖြူရောင်စက္ကူအရသိရသည် Orijen de la Casa ချန်ပီယံလိဂ်အစားအစာ:
•အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအနေဖြင့်ကြောင်များနှင့်ခွေးများသည်သူတို့၏ဝမ်းကွဲများထက်ပိုမိုအထီးကျန်သောနေထိုင်မှုပုံစံကိုနှစ်သက်ကြသည် ၀ ံပုလွေများနှင့်အဆီပမာဏကိုအလယ်အလတ်ခွဲခြားရန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည် ၁၅ မှ ၁၈% အကြားဖြစ်သင့်သည်။
•အဆီနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှစ်မျိုးလုံးသည်စွမ်းအင်ကိုပံ့ပိုးပေးသော်လည်း၊ ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်၏သက်ရှိ။ ကြောင်နှင့်ခွေးအစားအစာများတွင်အဆီများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊
• Carbohydrates သည်အဆီထက်စွမ်းအင်ကိုမြန်စေသည်။ လူသားများတွင်မြင့်မားသောစားသုံးမှု ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များသည်ကြွက်သားများဂလိုင်ကိုဂျင်ကိုတိုးစေသည်။ အတွက်အတူတူပင်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဝန် ခွေးများသည်ကြွက်သားများ၌ Lactic အက်ဆစ်ပမာဏအလွန်များပြားစွာဖြစ်ပေါ်စေသည် အားနည်းခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သော hypoglycemia ။
Carlos Alberto Gutierrez ကသူ့စာအုပ်ထဲမှာပြောထားသည် ခွေးအစာ၏အရှုပ်တော်ပုံအမှန်တရား:
တိရိစ္ဆာန်အဆီသည်သင့်ခွေးအားမထုတ်လုပ်နိုင်သည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော fatty acids များကိုပေးသည်။ အရေးကြီးသော Omega3Fatty Acids များထက်ပိုသောအရာမရှိ။
သို့သော်ခွေးသည်တောခွေးဖြစ်သည့်ဝံပုလွေ၊ ကျားသို့မဟုတ်အနက်ရောင် Panther နှင့်တူညီသည်။ သင်ပို့လိုသောသတင်းစကားကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြထားသောရိုးရှင်းသောမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။
အရိုးများသည်အာဟာရဓာတ်ဆိုင်ရာအာဟာရပညာရှင် Carlos Alberto Gutierrez ၏အဆိုအရ
နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ သဘာဝရှိခွေးသည်အဓိကဖမ်းမိသောသားကောင်ကိုစားကျက်စားပြီးအရိုးများကိုကြိတ်ခွဲကာအရိုးဖွဲ့စည်းပုံအတွက်လိုအပ်သောကယ်လစီယမ်နှင့်ဖော့စဖရပ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်ကျွန်ုပ်တို့နောက်မှတွေ့ရမည့်အခြားသတ္တုများလည်းပါဝင်သည်။
အရိုးပတ်ပတ်လည်အသား nibbling သို့မဟုတ်တင်းကျပ်စွာချိတ်ဆက်ရွတ်နှင့်အတူတိုက်ခိုက်နေကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခွေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုအရူးမောင်းနှင်သည့်အရသာတွင်းခြင်ဆီကိုမထားပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ပြီး၎င်းတို့အားလူကြီးများဖြစ်ပြီးတစ်ခါမျှမစားဖူးပါက၎င်းတို့အားကျန်းမာသောအလေ့အထမဖြစ်စေမချင်းတစ်ဆင့်ချင်းစီမိတ်ဆက်ပေးရသည်မှာမှန်ပါသည်။ ဤကျန်းမာသောအလေ့အထကိုမကျင့်သုံးမီ၊ အစားအစာတွင်ပါ ၀ င်မှု၏အရေးကြီးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားအထောက်အကူပြုမည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုကြည့်ကြပါစို့။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမဲသားသို့မဟုတ်ဝက်သားအရိုးများတွင်ကယ်လ်ဆီယမ် ၂၃ မှ ၃၂%၊ ဖော့စဖောရက် ၁၃ မှ ၁၅%၊ ပရိုတင်း ၆ မှ ၈% နှင့်အစိုဓာတ် ၇ မှ ၁၀% ပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ဆိုဒီယမ် (၅.၅%)၊ သံ (၂.၆%)၊ မဂ္ဂနီစီယမ် (23%)၊ သွပ် (32%) နှင့်အချို့သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များဖြစ်သော lysine နှင့် methionine တို့၏ရင်းမြစ်လည်းဖြစ်သည်။ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေအရိုးတွင်းခြင်ဆီ (တွင်းခြင်ဆီ) တွင်ပါ ၀ င်သောအဆီအက်စစ်များ၏အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကြွက်သားနှင့်အရေပြားအောက်ရှိအဆီများထက်ပိုအဆီအက်စစ်အက်ဆစ်များနှင့်ဖော့စဖိုလ်ပိုလစ်များပိုမိုပါဝင်သည်။
အကယ်၍ မှန်ကန်ပါကချက်ထားသောအရိုးသည်ရေများစွာဆုံးရှုံးပြီးအလွန်ခြောက်သွေ့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြောပြီးအာဟာရများကိုဖယ်ရှားရန်ပြtoနာဖြစ်နိုင်သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ချက်ပြုတ်နေစဉ်၎င်းတို့ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ခွေးအားချက်ပြုတ်သည့်အရိုးများကိုမပေးရ။ ဒါကသေချာတဲ့ပြproblemနာပါ။
အာဟာရအရိုးကိုခွဲခြားရန်လိုအပ်သည် (ကြက်၊ ယုန်၊ Partridge၊ ငုံး) အဆီမြင့်နှင့်အပန်းဖြေအရိုး (အမဲသား၊ ဝက်သား၊ နွားစားစသည်တို့)၊ ၎င်းကိုသူ့အတွက်အလွန်လှုံ့ဆော်ပေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုမျို ချ၍ မခံစားမိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ အပန်းဖြေသောအရိုးသည်သွားများကိုလည်းသန့်ရှင်းစေရန်နှင့်သူတို့အတွက်ကောင်းမွန်သောဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သည်။ ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သူတို့အစားအစာကနေရရှိနိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ငါအနည်းငယ်ပိုပြီးနက်ရှိုင်းနှင့်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။
အမဲသား၊ ဝက်သား၊ ကြက်၊ ကြက်ဆင်၊ သိုး၊ သိုး၊ ယုန်သို့မဟုတ်မြင်း၊
အသားများကိုကုန်ကြမ်းသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ချက်ပြုတ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကြော်ပါ။ အရိုးမရှိဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းရှင်းနေတယ်။ အရသာရှိတဲ့အရိုးတွေဖြစ်ရင်ကုန်ကြမ်းပေးပါ။ ငါးသည်ချက်ပြုတ်သို့မဟုတ်စည်သွတ်ဘူးသည်။ ခွေးအတွက်ပြproblemနာဖြစ်စေနိုင်သည့် Anisakis ရှိလျှင်ကောင်းစွာစောင့်ကြည့်ပါ။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၎င်းသည်တစ်ခုခုပေးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ၏အားသာချက်ကိုယူသော, တစ် ဦး လုပ်နိုင်တဲ့ကနေပေးရကြိုက်တတ်တဲ့။ ကြက်ဥများ၊ သို့သော်သင်လိုချင်သောအရာသည်သူတို့မစားရသောအရာများဖြစ်သည်။
သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ခွေး၏အစားအစာ၏သေးငယ်သော်လည်းအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သူတို့တွင်ဓာတ်သတ္တုများ၊ အမျှင်များနှင့် phytochemicals ဟုခေါ်သောအရာဝတ္ထုများရှိသည်နှင့်ဤအရာအားလုံးကိုသဘာဝရင်းမြစ်မှ။
သဘာဝတွင်ခွေးတစ်ကောင်သည်အစာများများစားခြင်း၊ အစေ့များ၊ အစေ့များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ဥများကိုသာအူထဲ၌သယ်ဆောင်နိုင်သည်၊ ၎င်းပမာဏသည်အလွန်သေးငယ်သည်။
ကျနော်တို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲခွေးဟာအသားစားသတ္တဝါတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ် အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်ပစ္စုပ္ပန်။
ငါးဆီများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Omega3နှင့် Omega6fatty acids များအတွက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်သူကသူတို့ကိုမဖန်တီးနိုင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေး၏အစားအစာအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ Orijen White Paper အဆိုအရ:
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော fatty acids များသည်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်သောအဆီများတွင်ပါဝင်သော fatty acids ဖြစ်သည်။
၄ င်းတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမထုတ်လုပ်နိုင်သဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော fatty acids များသည်အစားအစာမှလာရမည်။
အရေးအကြီးဆုံးမှာ linoleic နှင့် Arachidonic4 (Omega-6), DHA နှင့် EPA (Omega-3) တို့ဖြစ်သည်။
ဤအဆီနှစ်ခုသည်အတူတကွအလုပ်လုပ်သောကြောင့်အိုမီဂါ (၆) နှင့်အိုမီဂါ (၃) အကြားမျှတသောချိန်ခွင်သည်အရေးကြီးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၂း၁ မှ ၅း၁ အချိုးကိုကြောင်များနှင့်ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အိုမီဂါ -6 ချို့တဲ့မှုသည်အလွန်ရှားပါးသောကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများတွင်အိုမီဂါ -6 အလွန်များပြီး၊ အိုမီဂါ -၃ နည်းလွန်းသည်။
• Omega-3 အရည်အသွေးသည်အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်အရင်းအမြစ်များအကြားအလွန်ကွာခြားသည်။
• Omega-3s အမျိုးအစား ၃ မျိုးအနက် ALA (alpha-linolenic acid) သည်အပင်များမှဆင်းသက်လာသည်။ DHA (dicosahexaenoic acid) နှင့် EPA (epicosapentaenoic acid) သည်ငါးများမှဖြစ်သည်။
•ခွေးများနှင့်ကြောင်များသည် ALA မဟုတ်ဘဲ DHA နှင့် EPA လိုအပ်သည်။
အပင်များမှ Omega-3 သည် ALA ဖြစ်ပြီး၊ ပဲပုပ်၊ rapeseed oil နှင့် flax တွင်တွေ့ရသောတိုတောင်းသောကွင်းဆက် Omega-3 ဖြစ်သည်။
ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်ကိုအာဟာရဖြစ်စေရန် ALA ကို EPA နှင့် DHA သို့ပြောင်းလဲရမည်။
ဤပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်ကြောင်နှင့်ခွေးများကိုအဆင်မပြေသောကြောင့်အပင်မှ Omega-3 ALA ကို "မလှုပ်မရှား" ဟုသတ်မှတ်ပြီးခွေးနှင့်ကြောင်များအတွက်ဇီဝဗေဒနှင့်မကိုက်ညီပါ။
EPA နှင့် DHA အိုမီဂါ -3 မှငါး
တိရိစ္ဆာန် Omega-3s (EPA နှင့် DHA) များသည်ရှည်လျားသောကွင်းဆက် Omega-3s များဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့တိုက်ရိုက်စုပ်ယူသည်။ salmon, herring နှင့် corigone ကဲ့သို့သောအဆီငါးများတွင် EPA နှင့် DHA သည်ခွေးများနှင့်ကြောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးအိုမီဂါ -၃ ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဆော်လမွန်သို့မဟုတ်သမင်ဒရယ်ကဲ့သို့သောငါးဆီများကိုတစ်လီတာမှသည်ဆေးတောင့်အထိအမျိုးမျိုးသောပုံစံများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အာဟာရဗေဒပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်လျော်သောပုံစံနှင့်အရေအတွက်ဖြစ်သင့်သည်။
ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ် Orijen's White Paper ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လူသားများအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်ဖြစ်သော်လည်းခွေးများတွင်အာဟာရညီမျှမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁) ။ ရိုးရှင်းသောကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်သို့မဟုတ်သကြား
ရိုးရှင်းသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်များသည်ရိုးရှင်းသောသကြားများ (သို့) သကြားနှစ်မျိုးဖြင့်စုစည်းထားပြီးပြောင်း၊ ဂျုံနှင့်ဆန်ကဲ့သို့သောအသီးများတွင်တွေ့ရသည်။
ရှုပ်ထွေးသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်များသည်သကြားဓာတ်ပေါင်း ၂ ခုထက် ပို၍ ရှိပြီးအာလူး၊ ပဲပင်များတွင်လည်းတွေ့ရသည်
•ရှုပ်ထွေးသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်များသည်အစာအိမ်အတွင်းပြိုကွဲခြင်း (သို့) အစာမကြေဘဲဖြတ်သန်းသွားခြင်းအတွက်အချိန်များစွာကြာနိုင်သည်
•သဘာဝအစားအစာတွင်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်လုံးဝနီးပါးမပါရှိသည့်အပြင်အစာအိမ်၏သေးငယ်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောစီရီရယ်၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလည်းပါ ၀ င်သည်
•သမားရိုးကျခြောက်သွေ့တဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာတွေမှာအများအားဖြင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုရဲ့ ၄၀ မှ ၅၀% ကျော်သောအစားအစာများမှာအလွန်မြင့်မားတဲ့ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်တယ်။
•ခွေး၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များထက်များသောအားဖြင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်သောက်သုံးခြင်းသည် (ပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာနှင့်များသောအားဖြင့်) အတွင်းအင်ဇိုင်းများသည်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အပိုများကိုခန္ဓာကိုယ်အဆီအဖြစ်သိုလှောင်စေသည်။
•အမေရိကန်အစားအစာထိန်းချုပ်ရေးအရာရှိများ (AAFCO) ၏အာဟာရဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းများကခွေးများနှင့်ကြောင်များအတွက်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်နှင့်၎င်းတို့၏အစားအစာများတွင်အနည်းဆုံးဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏမလိုအပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
• Dr. David S. Kronfeld ၏အဆိုအရအသည်းသည်ပရိုတိန်းနှင့်အဆီမှဂလူးကို့စ်ကိုလုံလောက်စွာဖန်တီးပေးနိုင်သောကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူခွေးများကိုသာမကကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များကိုမထောက်ပံ့ရန်မလိုအပ်ပါ။
ထို့ကြောင့်ခွေးကိုဆန်သို့မဟုတ်သီးနှံအဆင့်မြင့်စွာအစာကျွေးခြင်းနှင့်ထွက်ပြေးခြင်းအတွက်ထုတ်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိုသောအရာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ခွေးသည်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်မှမဟုတ်ဘဲအဆီမှစွမ်းအင်ရရှိသောကြောင့်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု။
တိရိစ္ဆာန်အချို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေး၏အစာနှင့်ရောနှောသောအခါအချိုးအစားသည်တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်း (၃) ခုနှင့်အသီး (သို့) ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးအတွက်စီရီရယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
နွားနို့ကဲ့သို့ပင်များသောအားဖြင့် ၀ မ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ၎င်းသည်အစာကိုကောင်းစွာမချေနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆီကြွယ်ဝသောဒိန်ခဲ၊ ဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်စသည့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများသည်အစာကြေကျပြီးကျန်းမာစေသည်။ ဤနေရာတွင်သင်အနည်းငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုသည်၊ နောက်မှကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကိုင်တွယ်မည့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
အရင်တုန်းကခွေးစားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူတွေကအသားသတ်သူတွေပါ။ သို့သော်မိသားစုခွေးသည်မိသားစုကဲ့သို့ပင် pout စားသုံးခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်၎င်း၏အပြုသဘောနှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများရှိပါတယ်။
ကောင်းကျိုးတွေထဲမှာခွေးတစ်ကောင်ရှိလိမ့်မယ် အမျိုးမျိုးသောအာဟာရအရင်းအမြစ်များနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆိုးကျိုးများအနက်အရိုးများပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည် အရမ်းခွေးရဲ့အစားအစာ humanize ။
စက်မှုအစားအစာ, သကြားလုံး, ချောကလက်
၎င်းတို့သည်ခွေးများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အာဟာရတန်ဖိုးသိပ်မရှိသော်လည်း၎င်းသည်လုံလောက်သောဆုဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ချောကလက်တစ်အောင်စသည်သင်၏အရသာရှိသည့်ဘူးသီးအတွက်အရသာရှိသောဗုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာနေ့တိုင်းအတွက်အားရစရာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကရက်အနည်းငယ်အဘို့ရည်းစားရှိနိုင်ပါသည်
နှစ် ဦး အရေးကြီးသောသဘောတရားများ: အမျိုးမျိုးနှင့်စံ
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်နှင့်အစာအာဟာရမျှတမှုကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးသောထင်မြင်ချက်နှစ်ခုကိုကိုင်တွယ်ရမည်။
မျိုးစိတ် - ခွေးသည်နို့တိုက်သတ္တဝါဖြစ်သည်။ အဟာရအမျိုးမျိုးရှိလူသားများနှင့်များစွာဆင်တူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်၏အစားအစာမှတဆင့်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုရတဲ့, ဒီအချို့ကစားစရာရှုထောင့်ရှိသည်ဖို့ရတဲ့အပြင်သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံနှင့်၎င်း၏လူမှုရေးဘက်၌၎င်း၏အခြမ်းရှိပါတယ်။ အစာနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်အရအမျိုးမျိုးသောရောဂါများမှတဆင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အသိဥာဏ်ပညာအဆင့်ဆင့်တွင်ဖြစ်စေ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကိုနေ့စဉ်အစာကိုအစာကျွေးသကဲ့သို့တင်းကြပ်သောအစားအစာကိုပေးအပ်ခြင်းဖြင့်သူ့အားကစားခြင်းနှင့်အတူသူတို့၏အဓိကပျော်စရာဖြစ်သောခွေး၊ အစားအစာကဲ့သို့သူ၏ဘဝ၏အရေးကြီးဆုံးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမှသူ့ကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ ဒီအရာအားလုံးအတွက်၊ မင်းဟာဝက်ပေါင်ခြောက်နဲ့ပုစွန်တွေကိုတစ်သက်လုံးမစားဘဲနေလို့မဟုတ်ဘဲသူတို့ကသင့်ကိုဘီစကစ်ပုံစံနဲ့ပေးရင်ငါတို့ခွေးဟာအစားအသောက်အမျိုးမျိုးကိုစားကြလိမ့်မယ်။ \_ t ဒါဟာအားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာအလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုသည်။
လိုအပ်ချက် - ဝဘ်ပေါ်တွင်ခွေးစာကျွေးခြင်းလမ်းညွှန်များစွာရှိသည်။ ငါအဲဒါကိုမငြင်းဘူး။ အချို့သည်ကြီးကျယ်သောပညာရှင်များမှဖြစ်သည်၊ သို့သော်အများစုမှာ၎င်းတို့သည်ခွေးလောကနှင့်ဘာမှမပတ်သက်သောဂျာနယ်လစ်များ၊ Nestle Purina သို့မဟုတ် Kraft မှဖန်တီးသောအစားအစာလိုင်းများကိုသူတို့၏အစာကျွေးရန်လိုင်းများရောင်းရန်ရေးသားသည့်ဆောင်းပါးများဖြစ်သည်။ အဖြစ်မှန်နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဒီလမ်းညွှန်မဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့်။ ဤလမ်းညွှန်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အာဟာရပညာရှင်များ၏အကူအညီဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင့်ရဲ့ခွေးရဲ့အစားအစာထဲမှာအမှန်တရားရှာဖွေနေ။ အစစ်အမှန်များအတွက်သူ့ကိုအစာကျွေး၌တည်၏။ ပြီးတော့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့၊ မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အသုံးပြုဖို့အချက်အလက်တွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေး၏အာဟာရဓာတ်သည်အစားအစာနှင့် ပတ်သတ်၍ လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုအသစ်ကြောင့်အလွန်အမင်းအေးစက်နေသည်။ အငြင်းပွားမှုများ၏အဓိကအရင်းအမြစ်မှာလေ့လာမှုများ၊ ညီလာခံများနှင့်အမျိုးမျိုးသောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများဖြစ်သည်။ သန်းကြွယ်သူဌေးကိုလစာပေးသောပညာရှင်များ သူတို့လိုချင်တာကိုပြသရန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များက - ဒီအစာဟာခွေးအတွက်ကောင်းတယ်။ သဘာဝအစားအစာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ကသည် ခွေးတွေကိုကျွေးမွေးတဲ့နေရာမှာဒဏ္seriesာရီတစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်၎င်းတို့တွင်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားရှိရှိသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းကိုလျစ်လျူရှုခြင်း၊ သန်းနှင့်ချီသောတိရိစ္ဆာန်များသည်သူတို့အတွက်လုံးဝမကျန်းမာသည့်အစားအစာကိုစားသုံးရန်ရှုံ့ချခြင်း၊ စီးပွားရေးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သူဝယ်ယူသောထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူအပေါ်ထားရှိရမည့်ယုံကြည်မှုကိုချိုးဖောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ သင်၏ခွေးတစ်ကောင်လုံးအတွက်လုံးဝပြီးပြည့်စုံသောအစာမဟုတ်သည့်သင်၏ခွေးများအတွက်ကျန်းမာရေးပြfoodနာများနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်လျှင်သင့်အားရောင်းချပေးသည်။ ၎င်းဒဏ္sာရီအများစုသည်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံရှိသော်လည်း၎င်းအများစုမှာစင်ကြယ်ပြီးရိုးရှင်းသည့် demagoguery ဖြစ်ပြီးအာလူးသို့မဟုတ်ကြက်သွန်နီကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုနတ်ဆိုးစွဲခြင်း၊ ဒီဒဏ္myာရီတွေ၊ ဒဏ္legာရီတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နောက်ဆောင်းပါးမှာအသေးစိတ်လေ့လာမယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ခုရှိတယ်၊ အရာအားလုံးကပိုများနေတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သူ့ကိုတစ်လလျှင်နေ့စဉ်ကြက်သွန်နီကိုကျွေးမွေးပါကသူ့ကိုအမှန်ပင်သတ်ပစ်လိမ့်မည်။ တစ်လအတွက်သင်၏ကြက်သွန်နီကိုသာစားပါ။ ဒီနေရာဟာငါအနည်းငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကဲဖြတ်ရှိခြင်း၏ပြောသောနေရာဖြစ်သည်။ သင့်ခွေးရဲ့ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ကြက်သွန်နီနဲ့သင်၏မက်ကာရိုနီယမ်စားတာ၊ ကျန်ကိတ်မုန့်ဒါမှမဟုတ်ရေခဲမုန့်ကိုစားတာကမကောင်းဘူး။ သူ့ကိုနေ့တိုင်းရေခဲမုန့်ပေးခြင်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးသတ်မှတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကိုကောင်းစွာကျွေးမွေးခြင်းသည်အလေ့အကျင့်နှင့်လိုချင်သောအရာများဖြစ်တတ်ပြီး၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့ achieve ဖွယ်ကောင်းသောအံ့ဖွယ်ရာများကိုအောင်မြင်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်အစ်ကို Javier Carretero မှာ ၂၅ နှစ်လုံးလုံးသူ့ခွေး Gus၊။ ဒါဟာဟာသမဟုတ်ဘူး။ သူဟာအသက် ၂၃ နှစ်တိုင်အောင်တက်ကြွနေပြီးသူ့ဘဝမှာအစာတောင့်ကိုမစားခဲ့ဘူး။
နောက်ထပ် ado မရှိရင်မင်းရဲ့နောက်လာမည့်ဆောင်းပါး၊ ကျွန်ုပ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့မင်းရဲ့ခွေးများအတွက်စာရွက်စာတမ်း၊ ငါမိတ်ဆက်ပေးအဆင့်ကနေသဘာဝအစာ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထိငါတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများကိုငါပေးမယ်။
ဒီကနေ Carlos Carlos Alberto Gutierrez ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခွေး Nutritionist.comသူမ၏သင်ကြားမှုနှင့်သည်းခံခြင်းနှင့်ထံမှ Silvia Beseran သည် GEDVA ငါ့ကိုရှုထောအခြားရှုထောင့်ကနေငါ့ကိုခွေးတွေ့ဆုံ၏လမ်းကြောင်းအပေါ်ချပြီးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးတစ်ကောင်အစာကျွေးလမ်းညွှန်
မာရီယာ caicedo ဟုသူကပြောသည်
Maria Caicedo အားပြန်ပြောပါ
မာရီယာမင်္ဂလာပါ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လုံးဝစစ်မှန်တဲ့။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနံနက်ခင်း naku or summun လိုခွေးခြောက်သွေ့တဲ့အစားအစာကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။
ဟင် Miriam မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Naku နဲ့ Summun နှစ်ခုစလုံးဟာကောင်းမွန်တဲ့ခွေးတွေရဲ့အမှတ်တံဆိပ် ၂ ခုပါ။ ဒါပေမယ့်ငါအမြဲပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ဟာအဲဒီ့အစားအစာမျိုးကိုပေးရုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ တဖန်ငါကြိုက်နှစ်သက်သောသဘောတရားနှစ်ခုကိုအပြင်းအထန်တောင်းဆိုသည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါ itsukikatsura လာရာ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်သင့်ခွေးနှင့်အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးသောအစားအစာများကိုစာရင်းပြုစုသည့် taxonomy (အစားအစာပိရမစ်) ရှိသည်။ ဤ taxonomy သို့မဟုတ်ပိရမစ်သည်သင်၌အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးသင့်အတွက်အဆိုးရွားဆုံးသောအရာကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်။ ထို့နောက်ငါစာသားထဲမှာပြီးသား, ငါသတ်သတ်မှတ်မှတ်လက္ခဏာများလုပ်အနည်းငယ်ဖွံ့ဖြိုး။ အကယ်၍ သင်သည်ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါကသင်၏ကွဲပြားမှုကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ ငါဆိုသည်မှာအဓိကအားဖြင့်သင်၏အတွေးအမြင် (Variety and Criterion) ကိုကျိုးနွံစွာကျွေးမွေးနိုင်မည်ဟုငါပြောခဲ့သည်။ ခွေးအတွက် ၁၀၀% မကောင်းသောသို့မဟုတ် ၁၀၀% အကျိုးရှိသောအစားအစာများမရှိပါ။ လူသားများကဲ့သို့ပင်အရေအတွက်သည်မေးခွန်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုလုံးဝကောင်းစွာမရှင်းပြနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွေးမစားသင့်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဖတ်သည့်အခါကျန်ရှိနေသေးသောခံစားချက်ကကျွန်ုပ်ကိုခံစားစေသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ထပ်မံဖတ်ရန်နှင့်သင့်တွင်မေးမြန်းနိုင်သောမေးခွန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အရငါဟာခန်းခြောက်အစားအစာများနှင့် Champion Foods စက်ရုံမှအစာကျွေးရန် NAKU ကိုအကြံပြုသည်။ နှုတ်ဆက်ခြင်း။
Dennys Garcia ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို၊ ငါ့ခွေးအတွက် အစားအသောက်ကျွေးဖို့ ကူညီပေးနိုင်ရင်၊ သူ့မှာ ဓာတ်မတည့်တာ၊ သူမဟာ Labrador ပါတဲ့ Sharpei လက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်ခုပါ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်က သူမအတွက် အထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုခုကို မပေးဘူးလို့ ပြောခဲ့ပေမယ့်၊ အစေ့တွေပဲပေးပေမယ့် သူမအသက်က 1 နှစ်ရှိနေပြီ 1 လနဲ့7လလောက်ကြာနေပြီထင်တယ် အရေပြားဓာတ်မတည့်လို့ ဆံပင်တွေကျွတ်တာ x အပိုင်းတွေ ကျေးဇူးပြုပြီး Chloé ရဲ့ အပိုင်းကနေ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါလား။ ကျွန်တော်နဲ့ သူ့အမေ Canina Dennys
Adriana အလင်း ဟုသူကပြောသည်
ဒီစာမျက်နှာအတွက်နှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးလမ်းညွှန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုလံဘီယာတွင်နေထိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်မွေးစားထားသောခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်၊ မုတ်ဆိတ်မွေးသည့်ကော်လီနှင့်အခြားမျိုးနွယ်စပ်ကြားမှလက်ဝါးကပ်တိုင်မှမွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ဆောင်းပါးများကိုကျွမ်းကျင်သူအရင်းအမြစ်များမှကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုများစွာဖြင့်ထောက်ခံထားပုံရသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးသည်သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ ဆရာဝန်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများကိုငှားရမ်းကာသူတို့၏နည်းစနစ်များနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုထောက်ခံရန်ငှားရမ်းကြသည်။ နောက်ခံတွင်ထိုကျွမ်းကျင်သူများသည်အဆင်ပြေဆုံးအမှန်တရားကိုရှာဖွေမည့်အစား၊ ဒီစားသုံးမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းမျိုးစိတ်များ၏။
Luz Adriana ကိုပြန်ကြားပါ
တန်ဖိုးရှိသောအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အမှန်တရားကိုပြောပြရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်အာဟာရဓာတ်အားလုံးပါ ၀ င်သော“ အစာအဟာရ” နှင့်…” «စင်ကြယ်သောဂျုံမှုန့်နှင့်အခြားပြောင်းလဲမှုများ»ကိုထိခိုက်။ မရ လူတွေကိုဖျားနာစေတာ၊ သတ်ဖြတ်တာ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှပြောတာကဒီလိုအမြတ်အစွန်းကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသူတို့ရဲ့ "အချပ်" ကိုမဆုံးရှုံးဖို့ဘာမှမပြောဘူး။ တစ်နေ့ကျရင်သူတို့ဟာဘယ်ဘက်နဲ့ညာကျူးလွန်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုအတွက်အာဏာပိုင်တွေလိုက်နာမှုအတွက်ပေးဆောင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Valeria Cevallos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အရသာ ... အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါးပါ။ ကျွန်ုပ်၏ခွေးကိုအိမ်တွင်းအစားအစာနှင့်ခရစ်ကတ်အကြားဆက်စပ်မှုအဖြစ်အစဉ်အမြဲချိန်ညှိပေးသည်။ ဤစာဖတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကျူးလွန်ခဲ့သောအခြားအမှားများကိုပြင်ပါမည် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရိုးတွေမပေးဘူး။ ငါကြိုးစားမယ်။ နည်းနည်းချင်းစီကိုသူရဲ့အစားအစာနဲ့အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့၊ ငါ့ခွေးကလေးကအရေပြားယားယံမှုကိုပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်။ အစားအစာအဆိပ်သင့်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါစိတ်ပူမိတယ် !!! ... သူ့အခြေအနေအတွက်ထိရောက်တဲ့အစားအစာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် ???? P.S. (Breed: ဆိုက်ဘေးရီးယား Huskie) အလွန်ကျေးဇူးတင် !!!
Valeria Cevallos အားပြန်ပြောပါ
ဤဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်လေ့လာမှုများနှင့်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အလွန်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်မှတ်တမ်းဖြစ်သည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာကူညီ။ ကျွန်ုပ်၏ခွေးကိုကျွေးမွေးနိုင်ကြောင်းသိရှိခဲ့သည်။
Siberian Husky ၏အခြေခံစောင့်ရှောက်မှု